Kupatsanura kweMabhokisi Ekuchengetedza - YiXing International Logistics (GuangDong) CO., LTD
Hupenyu hwedu hwezuva nezuva haugone kusiya mhando dzese dzekugamuchira bhokisi, gamuchira chiitiko chaunopfeka kunze kwekugamuchira chinhu, chikuru dhizaini inotarisisa kune yakasarudzika runako uye collocation, gashira iyo sitirairi yaanopfeka zvinoenderanawo imhando dzakasiyana siyana. Zvigadzirwa zvekuchengetedza zviri kudiwa zvakanyanya mukushandisa kwedu kwemazuva ese. Chitoro cheAmazon chinotengesa akasiyana emabhokisi ekuchengetedza, uye zvigadzirwa izvi zvinozivikanwa kwazvo. Miss Anonyanya kugadzira kugadzirwa kwemabhokisi ekuchengetedza, mabhokisi ekuchengetedza uye zvimwe zvigadzirwa zvekuchengetedza. Sezvo iye aine tarisiro nezve tarisiro yekutengesa yeAmazon chikuva, akaisa mari yakawanda uye kushanda nesimba mune izvi zvigadzirwa. Kambani yaMiss Iye iri muShenzhen, yakavhura chitoro chekumba muAmazon American station, nguva pfupi yadarika pane batch yezvinhu inotumirwa kudura reAmazon muUnited States, saka ini ndoda kutsvaga inyanzvi logistics kambani kuti iite Sino- Kutakura kweAmerica.
Naizvozvo, Miss Akabata YiXing Global Logistics USA yakakosha mutsetse kuburikidza nekutsvaga Sino-US yakakosha mitsara logistics paInternet, ndokubvunza pawebhusaiti nezve mutengo wemidziyo yekutakura kuenda kuFBA USA nendege. Zvinoenderana neruzivo rwevatengi Joanna, iye akabva aronga kushandira Miss He neni, ndokutiudza kuti tinogona kupa imwechete-sevhisi seyekuchengetera imba yekuchengetera yeAmazon, kutarisira vatengi, kubvumidzwa kwetsika uye kuendesa. Ini zvakare ndakakurumidza kuongorora zvinhu zvinoenderana nemamiriro ezvinhu aMai He, ndikamhan'arira mari dzese kuna Miss He. Mushure mekufunga kwemazuva akati wandei, Miss Akandibata zvakare ndokukumbira kubvunza nezve ndege iri padyo, kutora zvinhu kubva kuShenzhen kuenda kudura redu musi iwoyo, uye kana zvinhu zvese nemagwaro aMiss Iye agadzirira, zvinhu zvacho zvinogona pakarepo yakatakurwa ndokuendeswa nendege yakananga kuUnited States.
YiXing Global Logistics tarisa kuUnited States FBA yakasarudzika yekutakura mutsara wekufambisa, uye inogona kukupa iwe kutakura zvakapetwa kaviri kusvika kumusuwo, mhepo yakapetwa kaviri kumusuwo, FBA kutanga kuendesa uye kumwe kumisa-kumwe masevhisi, kuitira kuti wako kuyambuka-muganho e -commerce logistics zvakanyanya kunetseka.